(Warbixin qoraal ah Iyo muuqaalo) Shan goobood ee dalxiiska dhulka Soomaalida ugu quruxda badan. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home News (Warbixin qoraal ah Iyo muuqaalo) Shan goobood ee dalxiiska dhulka Soomaalida ugu...
(Warbixin qoraal ah Iyo muuqaalo) Shan goobood ee dalxiiska dhulka Soomaalida ugu quruxda badan.
Qoraalka sawirka,Meel kamid ah gobolka bari
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan 13-ka bisha Sabtembar sannad walba u aqoonsatay in ay tahay maalinta dalxiiska Soomaaliya, ujeeddaduna waxa ay tahay sidii loo dhiirrigelin lahaa dalxiiska gudaha ee Soomaaliya.
Isla maalintaas, sannadkii 2017-kii ayey Soomaliya ku biirtay hey’adda Dalxiiska Adduunka, waxayna ku adkeysatay in dib loo soo nooleynayo dalxiiska Soomaaliya.
Dalxiiska Soomaaliya oo soo maray marxalado kala duwan, tan iyo 1960-kii, wuxuu ka mid ahaa hantida iyo hay’adahii dhisnaa ee dalka, iyo kaabayaal dalxiis oo gumeystihii Taliyaaniga uu ku wareejiyay dowoalddii Soomaaliya ka curatay 1960-kii. Waxyaabihii u ku wareejiyayna waxaa ka mid ahaa hoteelka caanka ah ee Juba iyo Shabeele Hoteel.
Qoraalka sawirka,Carruur ku dabaalaneysa meel u dhow dhismahan qadiimga ah ee Muqdisho.
Waaxda dalxiiska Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee uu saameeyay bur burkii, waxayna qaadatay ku dhowaad 30 sano, sidii dib loogu soo nooleyn lahaa.
Yaasir Baafo, oo ka mid ah dadka u ololeeya dib u soo nooleynta dalxiiska Soomaaliya, ayaa sheegay in dalka uu ka mid yahay dalalka caalamka ee dalxiiska dhabiiciga ah leh, haddii ay ahaan lahayd cimiladda, badda, beeraha, buuraha, biyo dhaca, carada iyo wabiyada.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhammaadkii sannadkii la soo dhaafay hirgelisay siyaasadda dalxiiska Soomaaliya oo ay ansixiyaan golaha wasiirada 29-kii Disember 2019-kii.
Qoraalka sawirka,Sidoo kale, dhallinyarada ugu badan ee Muqdisho waxay dalxiis u tagaan Xeebta Liido.
Inkastoo amni ahaan, Soomaaliya weli aanay ka jrin isku hallayn buux, sidoo kalena Dowladda Federaalka waxay wali dagaal kula jirta ururk Al Shabaab oo beegsata hoteellada, haddana muddooyinkii la soo dhaafay waxaa jiray dad si iskood ah isu abaabulay oo dalxiisSoomaaliya soo bandhigaya, iyagoo ka faa’ideesanaya cimilda, doogga qurxoon, badda iyo xoolaha loo daawasho tago.
Waxaa sidoo kale jira goobo badan oo kala duwan oo loo dalxiis tago. Waxaa soo qaadaneynaa qaar ka mid ah si daawasho ah:
Goobweyn waxay ku taallaa duleedka magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland, waxayna 10km u jirtaa bartamaha magaalada Kismayo.
Qaab dhismeedka Goobweyn iyo waxyaabaha dabiiciga ah ee ay caanka ku tahayba waxay sababeen inay ka mid noqoto meelaha aadka looga xiiseeyo dalalka caalamka, waxayna ku taallaa bogcad ay iskaga darsamaan biyaha badda iyo wabiga Jubba.
waxay leedahay deegaan beerashada ku wacan waxaana beero ka sameystay dad beeraley ah, waxayna leedahay dhir kala duwan, maadaama laga heli karo biyaha badda iyo kuwa wabigaba.
Sidoo kale waxay hadda noqotay goob dalxiis oo inta badan dadka taga magaalada Kismayo ay booqdaan ayna iskaga soo qaadaan sawiro, gaar ahaan halka ay isaga darsamaan biyaha wabiga Jubba iyo kuwa badweynta Hindiya.
Qoraalka sawirka,Xeebta Jasiira
Xeebta Jazeera oo ah dhul xeebeed u jirta 20 KM magaalada Muqdisho ayaa ah goob hore loogu asteeyay in ay ka mid noqoto goobaha dalxiiska Soomaaliya xilligii dowladii dhexe.
Inkastoo aanay lahayn hoteello la seexdo oo u dhow, haddana xeebta Jasiira waxay ka mid tahay meelaha ugu quruxda badan Soomaaliya.
Xilligii burburka uu jiray ayey xeebta Jasiira ka mid ahayd goobaha dalxiis ee dadku ay aadi jireen.
Qoraalka sawirka,Xilli galab ah oo qoraxdu sii dheceysay iyo dad ku sugan Xeebta Jasiira, waxaa dushooda mareysay diyaarad ku sii degeysay garoonka Aadan Cade
Jaziiradda Sacaadu Diin.
Jasiiradda Sacaadudiin waa jasiirad yar oo ku taalla xeebta magaalada Seylac ee Jamhuuriyadda Iskeed Madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland, waxaana loo socdaa 15-20 daqiiqo oo doon ah. Waxay ka mid tahay meelaha ugu bilicda iyo daawasha badan ee ay booqdan shacabka Somaliland.
Goobtani had iyo jeer way cagaaran tahay, waxaana ka baxa geedka loo yaqaano qandalka, waana goob ay biyaheedu degan yihiin. Sacaadadiin waa jasiiradda ugu caansan jasiiradaha Somaliland ee loo dalxiis tago.
Dadka inta badan taga halkaas waxay adeegsadaan laashash, mana laha goob deegaan oo loogu hoydo, balse waxaa loo tagaa dalxiis oo keli ah.
Weriyaha BBC-da ee Hargeysa, Khadar Xaaji Cabdullahi oo dhawaan halkaas booqday ayaa sheegay in goobta ay tahay mid soo jiidasho leh, dadkuna ay xiiseeyaan inay ku dabaashaan biyaha nadiifta ah, doomuhuna ku dhexmaraan.
Xeebta magaalada Eyl.
Eyl oo ah magaalo taariikhi ah una jirta 240 kilomitir magaalada Garowe ee maamul goboleedka Puntland ayaa caan ku ah buuro iyo dhismooyin taariikhi ah tan iyo Talyaanigii iyo Xarumihii saldhiga u ahaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan oo ay wali dhismooyinkaas qadiimiga ah ka dhex muuqdo magaalada bartamaheeda.
Magaalada waxaa kale oo ay leedahay beero iyo xeeb qurxoon. Waxaa ay sidoo kale leedahay matxaf lagu keydiya ama lagu qurxiyay waxyaabaha u gaarka ah dhaqanka Soomaalida.
Waxay ka mid tahay goobaha la booqdo ee gudaha dalka soomaaliya. Sidoo kale waxaa ku yaala dhisme weyn oo uu dhisay Sayid Maxamed Cabdile Xassan.
Magaalada Hobyo waa magaalo xeebeed ka tirsan maamul goboleedka Galamudug, waana magaalo aad u quruxbadan oo leh dhismooyin taariikhi ah, kuwaas oo ku teedsan xeebta magaalada.
Hobyo waxaa u dalxiis taga dad badan oo ka soo safra gobolada dhexe ee dalka, waxayna ka mid tahay goobaha ku haboon dalxiiska, sida ay sheegtay hey’adda Dalxiiska Soomaaliya.Goobtan waxaa hadda laga wadaa in la casriyeeyo lagana dhiso meelo nasasho iyo makhaayado, sida ay sheegeen dadka u ololeeya in la qurxiyo.
Inkastoo ay jiraan goobo kale oo gudaha dalka loo dalxiis tegi karo, haddana waxaa la aaminsan yahay in jiraan kuwo taariikhi ah oo ay ka mid yihiin kuwa aan kor ku soo xusnay.
Qoraalka sawirka,Dad kalluumeysato ah oo shabaq dhiganayay xeebta Hobyo oo ka mid ah meelaha qurxeen ee dalxiiska loo aado.
Dalxiiska Soomaaliya ayaa dhowaanahan soo xoogeysanayay, waxaana dadka u dalxiis tagay ka mid ah kuwa aan Soomaali ahayn.
Balse wuxuu ku tiirsan yahay Soomaalida dalka gudihiisa ka soo safarta ee u damaashaad taga goobo kala duwan iyo kuwa qurbaha ka yimid ee oo xiiseynaya in Soomaaliya ay kala bartaan.
Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in haddii nabad buuxda la helo, uu dalxiiska dalka xoogeysanayo dhaqaalena laga heli doono, maadama Soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer Afrika.
Previous articleSakuye community: A rich heritage blending tradition and mystique
Next article”Ma jiro xad u dhexeeya Shiinaha & Taiwan!” – Shiinaha oo galaa baxaya hawada Taiwan, iyo isagoo ku hanjabey inaanay u habran doonin.
Daawo; Ladadii Gole Ee Maamulka Khatumo Oo Kalfadhi Ku Shaaciyey Inay Hakiyeen Wadahadalkii Somaliland.
Dalka France Oo 213 muslimiin wadankiisa ka tarxiilaya iyo sifaha uu cuskaday.
Jaamacad ka mid ah kuwa ugu Tunka weyn Maraykanka oo Soomaalida ah ku dartay liiska jinsiyadaha caddaanka ah iyo Sababta.
Somaliland – Czech Republic Ties Irks Beijing,he Chinese Foreign Affairs Minister...
Maangale reporter - October 14, 2020
Walwaal Online; The Deputy Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Somaliland Hon. Liban Yousuf Osman was in Prague, the capital...
Kenya writes to the UK demanding justice over assault of Wycliff...
We were left out in innovation centre launch, Isiolo youths say
Invest in maternal health, Jordan princess tells counties
Start offtake now, government told
Water project changes lives of Riba residents
NPR blamed for ‘incompetent’ terror war
CoB: Why Mandera, Wajir won’t get cash just yet